Muurayi Bean: Anoseka, Asi Anodzvinyirira Wechitatu Munhu Shooter Game | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe uchida wechitatu munhu shooter mitambo yemavhidhiyo, iwe zvechokwadi wakambonakidzwa nekutamba akawanda mazita mune ino chikamu. Asi kana iwe zvakare uchifarira iyo yemavhidhiyo mitambo iyo inopa yakakura doses yekuseka kana zvinhu zvisina musoro chaizvo, saka iwe unofanirwa kuziva Muurayi Bhinzi. Iri zita rinotopa ruzivo rwakawanda nezve izvo iwe zvaunogona kuwana, mhondi inouraya ...
Zita rekuti Killer Bean rakatorwa kubva pa firimu rakagadzirwa naJeff Lew uye iyo yakavhurwa muna2009.Iyo pakupedzisira yaizovhurwa zvizere uye pachena kubudikidza neYouTube muna 2018, uko kwaizowana yakanaka inotevera. Zvakanaka, vese vane mhanza, nekuti ikozvino vane vhidhiyo mutambo wakavakirwa pairi.
Ndicho roguelike kunge shooter mumunhu wechitatu, sezvakataurwa nemugadziri wayo. Mariri iwe unokwanisa kupinda muganda reiyi Killer Bean uye kukunda matambudziko akasiyana, aine dhizaini rakasiyana nemamwe mazita eiyi tema, mamishini akasiyana, mavara akabatwa zvakanaka, nyaya yakanaka kumashure, uye yakajeka grafiki dhizaini sezvo iwe uchigona kufungidzira kubva ku screenshots.
Parizvino hapana zuva rakatarwa rekuburitsa, uyezve havana kupa budiriro yakawandisa. Hazvisati zvazivikanwa kuti ichatambiswa sei chaizvo, uye kana chiri chiitiko chakapenga kunge bhaisikopo chairo kana kwete. Asi kana zviri izvo, zvinogona kupedzisira zvave kubudirira. Parizvino, iwe unogona chete kuona iyo ruzivo pane iyo Steam foramu, uko musimudziri akasimbisa kuti ichave ichiwanikwa. yeLinux uye Steam Desk natively.
Pakati pevashoma ruzivo rwunozivikanwa Panguva ino, zvinozivikanwa kuti zvakarongwa kuisa muKiller Bean:
Misheni uye nyaya yakanyatso gadzirwa kubva pakutanga, iine zvimisikidzwa uye zvakawanda zvezvishamiso.
Mikana yekukwidziridza kugona kwehunhu hwako, senge hunyengeri, kugona kurwisa kwemaele, kugona kwepaki, kugona nezvombo zvakasiyana, nezvimwe.
Pachave nemapato akasiyana evavengi uye havadi mumwe.
Muurayi Bean anozotakurwa nemachira uye kurwa kwemuviri.
Nemota zhinji kutyaira uye akawanda akasiyana zvombo kuyedza.
Vatambi vazhinji vanofamba-famba pamapu vanobatsira kana kukurwisa.
Kugona kugadzirisa nekugadzira yako wega Shadow Beans yekuvhima Killer Bean.
Gadzira yako mamishini uchishandisa mepu mhariri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Muurayi Bean: mapenzi, asi muropa wechitatu munhu shooter mutambo
Mukadzi D akadaro
Alv .. zvirinani ndinamatire meme yeva fijolitos vachitamba nziyo dzakasiyana: PERREO HIJUEPUTA IYI NDE PERREO HIJUEPUTA kana Boca yo te Amo….
Pindura kuna Lady D